Hiran State - News: HS:-Saadaasha iyo mustaqbalka bulshada reer Hiiraan iyo fowdadii joogtada aheyd ee TFGda.
HS:-Saadaasha iyo mustaqbalka bulshada reer Hiiraan iyo fowdadii joogtada aheyd ee TFGda.
HS:- Marka aad maqasho magaca TFGda waxaa kuu soo baxeysa magac qurux badan oo waliba micnahiisu noqonayo dowlada kumeel gaarka federalka Soomaaliya.
Hadaba kadib guushii ay maanta gaareen ciidamada reer Hiiraan oo garab ka helaya kuwa dowlada Ethiopia durbaba waxaa caawa ka socda magaalada Mogdisho go,aano ay iskood iskaka qaadanayaan Shiikh Sariif iyo C/wali Gaas kaasi oo ah in dhawaantaan ay booqasho ku tagaan gudaha Hiiraan wasiirka qorsheynta iyo arimaha federalka,wasiirka gaashandhiga iyo nin ay doonayaan iney ka dhigaan gudoomiye gobol iyadoo ay hada shacabka Hiiraan joogaan heer dowlad goboleed.
Inkasta oo aanu dooneyn in aanu ka hor dhacno waxa caawa kasocda Villada iyo qiyaaliga lagu hayo ayaa u muuqdo Puntland waa maamul goboleed reer Hiiraana waxaa loo magacaabayaa gudoomiye gobol xili ay u baahan yahiin in maamulada u dhisan la mideyo kadibna mid weyn oo bulshada ka dhaxeeya loo helo shacabka.
Hadaba war bixin horu dhac ah oo aanu ka soo aruurinay shacabka Hiiraan iyo mowqifkooda rasmiga ah.
Dhamaanba dadku aad ayey caawa ugu faraxsan yahiin in ay caasimadii Hiiraan u tahay meel ka caagan argagixisada qorshuhuna yahay in guud ahaan laga sifeynayo Hiiraan waxkasta oo ay shacabka iyo ciidamada ay gaashanayaan ku qaatatoba, laakinse waxey ka digeen fowdadii joogtada aheyd ee ay markasta Hiiraan ku hayeen dowladahii is xig xigay iyadoo shaqsiyaadkii hogaaminayey uu midkasta waxkasta ka hor marin jiray danta qabiilkiisa oo aysan meeshu ka jirin wax hanaan dowladeed ah.
Hadaba faraqa u dhaxeeya sida ay wax u raban hogaanka TFgda iyo shacabka Hiiran sidey u yahiin kaaf iyo kala dheeri.
Madaxweyne Shiikh Shariif ayaa laga hayaa hadalo intooda badan wada gaaray kana dheregsan yahiin bulshada Hiiraan isagoo leh bur burkeyga siyasadeed waxuu soo deg degayaa marka reer Hiiraan is raacaan isagoo waliba mid ka mid ah qabiilada reer Hiiraan afka ku dhufanayo , sidaasi daraadeed waxey isaga iyo inta xeeyn daabkiisa ku jirto xal u arkaan iney cuuriyaamiyaan horumar kasta oo ay reer Hiiraan doonayaan iney gaaran.
1- Waxey si bareer ah dagaal ula galeen dowlad goboleedka Hiiraan State iyadoo ka dhax abuuray maamul kale oo ay ugu talo galeen in lagu carqaladeeyo HS oo la baxay Dooxada Shabeele kaaka darane isagii ma taageerayaan.
2- Waxey xitaa ku fashilmeen maadaama ay ku magacaban yahiin hogaanka dalka iney meel iskugu keenan intii ka soo horjeeday Hiiraan State si ay shacabku u noqdaan kuwo leh maamul adag ayna wada shaqeyn ka dhaxeyso bulshada Hiiraan iyo TFGda.
3- Qaar ka mid ah TFGda caawa kuma faraxsana in Shabaab laga xoreyey magaalada istiraatiijiga ah ee Belet Weyne wax kalena maahane qaarne degaanadooda ayaa maamul ka jiraa oo ma doonayaan in koofurta Somaliya laga hirgaliyo amaba ay TFGda la xisaabtanto maamul aan kooda aheyn.
4- Shiikh Shariif isagu soo dhaweyntii xiligii uu noqonayey madaxweynaha lagu soo dhaweyey Belet Weyne waxuu reer Hiiraan ugu bedelay colaad taasi oo aaqirkii raad raac badan kadib la ogaday iney saameyn dhinaca maskaxdaa ku yeelatay isaga shaqsiyan dagaladii inta badan miyiga Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ka dhici jiray ee dhax mari jiray beeshiisa iyo mid ak mid ah beelaha dega Hiiraan.
5- TFGda waxey horey dhegaha ugu fureysatay xildhibaanda dowlada ka tirsan ee ugu yaraan mudada ku sugnaa gudaha Hiiraan waxeyna doonayaan in shacabka Hiiraan meel cidlo ah laga yiraahdo waxanu taageersanahay TFGda oo loo sacbiyo.
6- Waxey doonayaan in Hiirana loo magacaabo gudoomiye gobol iyadoo aan wax la tashi ah lala yeelan waxgaradka, aqoonayahanada, culimada, ganacsatada, Ugaasyada, wabarada, salaadiinta oo ay iyagu nin iska soo magacabaan iyagoo hadba ku shaqeysanaya wasiirkii markaasi ka soo jeeda beesha Xawaadle.
Laakinse shacabka Hiiraan fikir midkaas ka duwan ayey qabaan.
1- Bulshada Hiiraan Waxey qabaan in ay dalka Soomaaliya ka dhalato dowlad Somaliyeed oo ilaalisa xuduudaha iyo calanka dowaldnimo iyo maamul goboleedyo ku yimaada rabitaanka shacabka.
2- Waxey ka soo horjeedaan in lagu qasbo wax aysan iyagu rabin ayna soo dhaweyn haba yaraatee madaxweyne iyo R/wasaare amaba xukumad dagaal kula jirta iyaga qiimokasta iyo dhibaato kasta oo ka soo gaartane u diyaar garoobaan.
3- Waxey qabaan in la mideeyo dhamaan dhinacyada siyaasada sida Hiiran State, Dooxada Shabeele, Hiiraan and Midland iyo hadiiba ay jiraan ururo kale oo ay ku jirto damac siyaasadeed, kadibna meel leyskugu keeno halkaas lagumideeyo dhamantood laguna dhiso maamul kumeel gaar ah oo shaqeeya oo kaliya ilaa 6 bilood kadiba doorasho ay marto cidii dooneysa iney hogaamiso reer Hiiraan.
4- Waxaa ka go,an iyagoo heli kara inuu Hiiraan hogaamiyo madaxweyne maamul goboleed in aysan dib ugu laban gudoomiye gobol taasne qofkasta oo ku riyooda waa ku ceeboobi doonaa.
Hadaba kama hor dhaceyno safarka ay maalmaha soo socda wafti ka socda TFGda ku tagi doonaan Hiiraan kuwaasi oo u hogaaminayo wasiirka Qorsheynta iyo midka Gaashaandhiga.
hadan soo gaabino nuxurka iyo ujeedka TFGda waa in gudoomiye gobol Hiiraan oo taariikhdaad aragtaan ku leh Soomaaliya loo magacaabo oo aysan dadku iyaga isku tashan Puntlandna dhaqaalaha dalka 50% loo leexiyo halka Hiiraan dagaal aan la ogeyn meesha uu ku dhamaan doono lagula jiro kaasi oo u muuqda iney isku baheysteen shaqsiyaad dano gooyni ah leh.
The good news shacabku sidii hore maahan maalmaha inagu soo aadan ayeyna waxkasta kala cadaan doonaan marka uu waftigaas gaaro gudaha Hiiraan oo ay dad yar ogyahiin safarkooda walow warar qaarkood sheegayaan in TFGdu ay fursadaan ka faa'ideysan doonto si ay iskugu soo dhawadan iyaga iyo shacabka ay xooga saari doonaan rabitaanka shacabka.
· admin on December 31 2011 16:27:55 · 0 Comments · 1888 Reads ·
14,613,015 unique visits